Isifo senhliziyo | Health Content
Isifo senhliziyongokuvamile sibhekisela esimweni esihilela inhliziyo nemithambo yegazi jengokulandelayo: umfutho wegazi ophezulu,Isifo se-artery coronary, icardiomyopathy, ukuhluleka kwenhliziyo,iangina,ivaluvi yenhliziyo,iarrhythmia,iarteriosclerosis,kanye nezinye futhi.
Umfutho wegazi ophezulu:Amandla noma ukungcindezeka kwegazi ondongeni yemithamu yegazi,okuthiwa futhi ama arteries.
Isifo secoronary artery: Isiqa sewaxy esibizwa ngokuthi plaque yakha ngaphakathi kwemithambo yecoronary(imishanguzo ehambisa ioksijeni yegazi emzimbeni)owaziwa ngokuthi iatherosclerosis.
Ichadiomyopathy :Isifo esingalapheki sezinhlanzi zenhliziyo(imyocadium) lapho imisipha ikhuliswa ngendlela engavamile ,igxilile noma inzima.Umfutho wenhliziyo obebuthakathaka ulahlekelwa ukupompa igazi ngokuphumelelayo okwenza kube nokungashayi okuxamile kwenhliziyo futhi kungenzeka ngisho ukuhluleka kwenhliziyo.
Ukuhluleka kwenhliziyo:Isimo lapho inhliziyo ingapompi igazi emzimbeni ngokufanele ,okusho ukuthi igazi alokwazi ukunikela ioksijini kanye ngokudla okwanele emzimbeni ngokusebenza okufaneleyo futhi kungahle kubangele:
- ukuzizwa ukhathala noma udangele
- ukungakwazi ukuqeda imikhiqizo yokudoba ngendlela efanele>okungakuholela ekwakheni ukutshezi emaphashini kanye nezinye izingxenye zomzimba ezifana nemilenze nesisu.
- ukuhluleka kwenhliziyo ngoba une(noma waba) nesimo sezokwelapha esithinta inhliziyo.
I-angina pectoris:Ubuhlungu besifuba noma ngokunganaki (ukucindezeleka) lapho imisipha yenhliziyo ayitholi igazi elilingene njengoba kudingeka ngoba umthambo owodwa noma ngaphezulu wenhliziyo isincane/inciphile noma ivimbekile.Futhi ibizwa ngokuthi I -ischemia.
Atherosclerosis:Ukwakhekha kwesiqi samafutha ngaphakathi kwemithambo yegazi.iatherosclerosis ivame ukubizwa ngokuthi iarteriosclerosis ngegama elivamile okuwukuqina kobuchopho noma (ukulahlekelwa ukuqina).
***Ukuhlaselwa kwenhliziyo kwenzeka lapho igazilidala ihluli emthini ebangela ukuvinjelwa okuphelele,leyo ngxenyeyesisu senhliziyo kunqatshelwe ukunikezwa kwegazi kuqala ukufa .
Isifo sevaluva yenhliziyo:Kuthintha indlela amavaluva asebenza ngayo ukulawula ukugeleza kwegazi ekungeneni nekuphumeni enhliziyweni
Iarrhythmia (eyaziwa nangokuthi idysrhythmia) noma yisiphi isiqgi esingajwayelekile/esivamile senhliziyo, kungaba kancane, ngokushesha kakhulu.Iarrhythmias ephansi(izinsimbi ezingaphansi kwezingu 60 ngomzuzu)kuthiwa yibradycardia.
IZIMPAWU ZOKUHLASELWA KWESIFO SENHLIZIYO
Ukucinana kwesifubeni: ubuhlungu obunzima noma ubunzima phakathi, kwesifuba obusabalela esandleni sobunxele, emqaleni,emhlane esiswini noma emihlathini.
Isiyaluyalu noma ukuzwa sengathi ungahlanza
Izibonakaliso kanye nezimpawu zokwehlisa noma ukungabekezelelani nokuzivocavoca .
Izimpawu zivame ukulethwa ukukhwishiza zenze ngcono ukuphumula.
Ubuhlungu esiswini ngasese, ehlombe noma emhlane.
Ukucinana esifubeni okungazinzile olunye uphawu olwenzeka uma uphumulile,livuse isiguli silele bese siphuze ukulala futhi.
Ukukhathala okukhulu nobuthakathaka noma
Ushintsho ekwenzeni inhlelo zemisebenzi yangemihlanjengokuhamba,ukugibela izinyathelo(steps),noma ukusebenza imisebenzi yasekhaya.
UKUPHELELISWA KWESIFO SENHLIZIYO
Isifo sokufa kohlangothi
Isifo se-artery yomzila
Ukufa kwenhliziyo kungalindelekanga.